Vaovao isankarazany avy amin’ny tontolon’ny bilaogim-behivavy · Global Voices teny Malagasy
Vaovao isankarazany avy amin'ny tontolon'ny bilaogim-behivavy
Voadika ny 05 Jona 2019 4:05 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Desambra 2012)
Black Looks manoratra ny fivoarana mahaliana ao amin'ny Repoblikan'i Afrika Afovoany izay nandràra ny media tsy handefa na hanoratra mozika sy lahatsoratra mankahala vehivavy taorian'ny torolalan'ny minisitry ny fifandraisana ary manantena fa ‘hanaradia koa ireo firenena hafa’.
Nyakehu manoratra ny fanontaniana napetraka taminy nandritra ny antsafa fitadiavan'asa izay manontany hoe “ahoana no fomba hialan'ny vehivavy amin'ny fiankinan-doha” izay nolazainy fa mbola ‘mikapokapoka amponga ao an-tsaiko’.
Miverina miblaogy taorian'ny fiatoana, mientanentana i Wambui noho ny diany tany Rwanda vao haingana nanova ny fiainany izay mifanohitra amin'ny ankamaroan'ny foto-keviny ary nitondra fanontaniana maro samihafa momba ny fomba fijeriny mikasika ny hoe ‘miasa amin'ny fikambanana mpiaro zon'olombelona‘ indrindra amin'ireo izay tena ‘tsy tiany valiana’.
Bronwyn manoratra momba ireo andiana fanolanana manafintohina tany Afrika Atsimo ary indrindra ny iray mahakasika zazakely 13 volana ary manontany hoe ‘rahoviana no hijanona izany?’
One African Woman manoratra momba ny fifaliana sy ny fahatsapana rehareha miseho amin'ny maha-mpikambana amin'ny vondrom-behivavy feno fangorahana izay nifanohana nandritra ny taona maro.
Taorian'ilay horohorontany vao haingana tany Afrika Atsinanana, tezitra tamin'ny fanamarihana nataon'ny manam-pahaizana iray i Spicebear noho izy nilaza fa tsy manana zavatra horavaina betsaka ny faritra voakasika na dia mety niteraka fahavoazana lehibe aza ilay horohorontany. Manontany izy na inona na inona nitranga ‘… hanahy ny aina nafoy sy ny mety ho faharavan'ny fiveloman'ny olona? Mety hoe mahantra sy sahirana izy ireo saingy tsy midika izany fa tsy zava-dehibe sy tsy misy dikany ny zavatra ananan'izy ireo“.
Soul nandefa sary mahafinaritra tao amin'ny bilaoginy taorian'ny fitsidihana vao haingana nataony tany Abuja.
Feno roa taona i Kenyan Pundit. Na ny marina ny blaoginy ary nanararaotra izany izy mba handefa fangatahana manokana ho an'ireo mpirotsaka an-tsitrapo haniry ny ‘hametraka ireo mpanao politikantsika ho tompon'andraikitra bebe kokoa.
Ny taona farany tamin'ny fanapahan-kevitra tao amin'ny kolejy dia ny hanandrana zavatra samihafa ary tamin'ny lahatsorany vao haingana, manoratra momba izany sy ny fitsapana sy ny fahoriana ateraky ny fanabeazana zatovo mikorontan-tsaina i Cute_angel
Nanolotra volavolan-kevitra 11 ho anafahana an'i Afrika tamin'ny taona 1957 i Kwame Nkurumah, filohan'i Ghana voalohany. Manasongadina zava-bita sasany tamin'izany tolo-kevitra izany i Helenism, toy ny fametrahana ny Vondrona Afrikanina sy ny Banky Afrikana momba ny Fampandrosoana.
Molara Wood manasa ireo mpamaky Nizeriana mba hanendry ny bokiny tsara indrindra tamin'ny taona 2005. Amin'ny 15 Desambra ny daty farany.
AfroFeminista manoratra tantara mahavariana momba ireo mpitaingina bisikileta eny an-dalamben'i Nairobi izay “fahorian'ny fisiako, anton'ny aretin-dohako rehefa mitondra fiara fa “tia setrasera, miampita eo anoloan'ny fiarako isa-maraina” hoy izy.